Info Center for Android
ရဘေေး သတငျးတှေ ဖတျခငျြတာပဲဖွဈဖွဈ၊ ကိုယျတိုငျ သတငျးတှဝေေ မြှခငျြတာပဲဖွဈဖွဈ တဈနရောထဲမှာ အလှယျတကူ ဖတျလို့၊ share လို့ရပါပွီ။ ဒါ့အပွငျ ကိုယျတိုငျလှူဒါနျးခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ ဆကျသှယျလို့ရမဲ့ အဖှဲ့ တှရေဲ့ လိပျစာတှေ၊ ဖုနျးနံပါတျတှလေညျးပါဝငျပါတယျ။ ကိုယျတိုငျလညျး အဖှဲ့အသဈတှကေို ထညျ့သှငျ့းပေးလို့ရပါတယျ။
ရေဘေး သတင်းတွေ ဖတ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်တိုင် သတင်းတွေဝေ မျှချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နေရာထဲမှာ အလွယ်တကူ ဖတ်လို့၊ share လို့ရပါပြီ။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်တိုင်လှူဒါန်းချင်တဲ့သူတွေအတွက် ဆက်သွယ်လို့ရမဲ့ အဖွဲ့ တွေရဲ့ လိပ်စာတွေ၊ ဖုန်းနံပါတ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း အဖွဲ့အသစ်တွေကို ထည့်သွင့်းပေးလို့ရပါတယ်။
Download and install Info Center version 1.0 on your Android device!
Android package: org.mmaug.InfoCenter, download Info Center.apk
What are users saying about Info Center
Appreciate developers .Nice app.Helpful !!
Well done... good job guys.. Great team work. Especially our one and only Xer Xer.
Suchauseful disaster info app for flooding area. Great contributions for Burmese flood victims. #SaveMyanmar